सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण नै देखिएन - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण नै देखिएन - www.khabardabali.com
सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण नै देखिएन
बैशाख २३ गते, २०७६ - १६:५१
यो त नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नै देखिएन । हिजो पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने । अहिले पनि त्यहि भन्ने । हिजोको नतिजा के भयो ? त्यसको कुनै कहिं कतै शोधखोज नगर्ने । कहाँ पुग्ने, कुन बाटोबाट जाने केहि ठेगान छैन् । होइन नीति तथा कार्यक्रम भनेको त सरकारको हिंड्ने बाटो हो । यो त पुरै अलमलमा छ ।
सुत्केरीलाई उद्दार गरेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यो त सामान्य सरकारको दायित्व हो । यसलाई पुरै त्यस्तो प्रचार गर्नु आवश्यक थिएन । यसले त सरकारले केहि कामै गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । गतिलो उपलब्धि नभएपछि यस्तो कुरालाई चर्चा गरियो ।
किन आर्थिक सुचांकहरु राम्रो देखिएन ? किन रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएनन् ? किन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गराउन सकेनौं ? खै उल्लेख गरेको ? यो नीति तथा कार्यक्रममा दृष्टिकोण पनि छैन् ? उहाँहरुले भन्ने गरेको दृष्टिकोण पनि देखिन्न । भाषण सहि नहोस् । एउटा कर्मकाण्डी मात्रै भयो ।
सामाजिक सुरक्षाको भत्ता दिनुपर्छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रले कतिको धान्छ । त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले पूर्वपश्चिम रेल, पानीजहाज के–के भन्नुभाको छ अनि थियो । ति के–के भए ? कति प्रगति भए ? हुन नसकेको के कारणले सकेनन् ? खै कहिँ प्रष्ट छैन ? भएका आयोजनाहरु पुरा हुनुपर्ने किन पुरा भएका छैनन् । न यो वर्ष भूकम्प आएको छ, न नाकाबन्दी, न बन्द हड्ताल, न आन्दोलन भएका छन् । केहिपनि समस्या छैन भने किन काम भएका छैनन् ।
कुन बाटोमा हिंड्ने भन्ने कुरामा सरकार पुरै अलमलिएको छ । यसले त समस्या बनाउँछ त । देश नै कमजोर हुन्छ । मुख्य कुरा सरकारसँग स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण चाहियो । त्यसको पुरै अभाव देखियो । यो अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा यति धेरै समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । हल गर्ने एउटा योजना पनि छैन् । यसरी त हुँदैन मुलुक गम्भिर समस्यामा पर्छ । हेर्नुस् व्यापार घाटा बढेको । उद्योग धन्दा भए भरका रुंग्न बन्दै गएका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रमा हतोत्साहित छ । सुंचाक त सबै नराम्रो छ । फेरि पनि सामान्य समिक्षा हुनुपर्दैन । खै नीति तथा कार्यक्रम भन्ने अनि किन समस्या भयो भनेर उल्लेख नगर्ने । यो त कुनै कथा होइन नी !
विकासका मुख्य आधार उद्योग धन्दा रुग्न अवस्थामा छन् । ति सञ्चालन आउने वातावरण यत्रो अवधिमा पनि सरकारले मिलाएन । कुन मोडेलमा लगेर सञ्चालन गर्ने केहि योजनै छैन् । काम गरेर देखाउने हो तर बोल्ने मात्रै भए जस्तो भयो ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता जोशी पूर्व उद्योगमन्त्री हुन्)
बैशाख २३ गते, २०७६ - १६:५१ मा प्रकाशित